သင့်ဖုန်းထဲမှာ Calendar App တစ်ခုရှိရုံနဲ့ ရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူး (၈) ခု | Duwun
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စ ကနေစပြီး ကုမ္ပဏီပိုင်းဆိုင်ရာတွေအထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ Calendar Appတွေကို လူတိုင်းအသုံးပြုဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ နေ့စဉ် ရုံးအလုပ်တွေသာမက ကိုယ့်ရဲ့ Personal ကိစ္စတွေကိုပါCalendarထဲမှာ နေ့ရက် ၊ အချိန် အတိအကျ စီမံခန့်ခွဲလို့ရသလို သတိမေ့တတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်ကို သက်ရှိတစ်ယောက်လိုသတိပေးနေမယ့် Calendar App တွေကို ဒီနေ့ခေတ်လို လုပ်စရာတွေ များပြားလာတဲ့ ခေတ်အခါမှာ ပိုလို့ လိုအပ်လာပါတယ်။
Calendar App တွေက ဘယ်လောက်ထိ ကိုယ့်ကို အကူအညီပေးနိုင်သလဲဆိုတာ ပြောပြချင်ပါတယ်။
Calendar App တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့တာ က စလို့ တစ်နှစ်လုံးစာအထိ လုပ်စရာရှိတာတွေ၊ တွေ့စရာရှိတာတွေ၊ ဝယ်စရာရှိတာတွေ ကိုယ့်ရဲ့ သတိတရလုပ်ရမယ့် ကိစ္စရပ်အားလုံးကို Calendar App ထဲမှာ ထည့်သွင်းရေးမှတ်ထားလို့ ရလို့ တစ်ခုခုလုပ်စရာရှိနေသလားဆိုတဲ့ စိတ်ကိုသက်သာစေမှာပါ။
၂။ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်အားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း
တစ်နေ့တာ မိုးလင်းကနေ မိုးချုပ်ချိန်ထိ မီတင်ဘယ်ချိန်၊ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်သူနဲ့ တွေ့ရမယ်။ ဘယ်အလုပ်တွေကို ဘယ်အချိန်မှာ အပြီးလုပ်ရမယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ အားလပ်ချိန်က ဘယ်အချိန်တွေ စတာတွေကို ထည့်သွင်းထားလို့ ရတဲ့ အတွက် ကိယ့်ရဲ့ အချိန်အားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲထားလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
၃။ဝန်ထမ်းအားလုံးကို Calendar နဲ့ အဆိုင်းချတာဝန်ခွဲပေးနိုင်ခြင်း
ကုမ္ပဏီဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Calendar တွေဟာ တစ်ရုံးလုံးမှာ ရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ တာဝန်တွေကို ခွဲ‌ေဝစီမံပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။Calendar ထဲမှာ ဘယ်ဝန်ထမ်းက ဘယ်နေ့ ဘယ်ချိန်မှာ ဘာတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုတာ တွေ့မြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်တာဝန်များကိုလည်း ကောင်းကောင်း စီမံခန့်ခွဲပေးနိုင်တဲ့ အားသာချက်ကို ပေးပါတယ်။
ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ တာဝန်တွေ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရုံသာမက Calendar ထဲကနေပဲ မီတင်တွေ ချိန်းဆိုနိုင်ပါသေးတယ်။ အလုပ်မေးလ်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Calendar တွေကနေတစ်ဆင့် ရုံးအတွင်းက ဝန်ထမ်းတွေကို Official မီတင်ချိန်းဆိုတာမျိုး ပြုလုပ်နိုင်သလို မီတင်ချိန် နီးကပ်လာချိန်မှာလည်း ဝန်ထမ်းတိုင်းကို Remind လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် အရမ်းကို အချိန်ကုန်သက်သာပြီး အကျိုးရှိပါတယ်။
တာဝန်တွေ ခွဲဝေတာ ၊ မီတင်တွေ ချိန်းဆိုတာသာမက ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကလည်း မိမိတို့ရဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေ ပြီးစီးကြောင်းကို Calendar App မှာပဲ Report လုပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ခုလို ကိုဗစ်ကာလမှာ အထက်လူကြီးနဲ့ အောက်လက်ငယ်သားတွေ မတွေ့ဆုံနိုင်ရင်တောင် Calendar ကတစ်ဆင့် စစ်ဆေးလို့ ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။
၆။အရေးတကြီးနေ့ရက်တွေကို Remind လုပ်လို့ရခြင်း
မီတင်နေ့ရက်တွေ၊ အလုပ်လုပ်ရမယ့် Appointment တွေသာမက အရေးတကြီးနေ့ရက်တွေအပြင် ကိုယ်ချစ်သူ ခင်သူများရဲ့ မွေးနေ့တွေ၊ အမှတ်တရနေ့ရက်တွေကိုပါ Calendar ထဲ ထည့်သွင်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့အတွက် အလုပ်အတွက်အပြင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေမှာပါ အဆင်ပြေစေပါတယ်။
တစ်နေ့တာသာ မက တစ်နှစ်လုံးစာပါ စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အပြင် လုပ်စရာကိစ္စရှိတိုင်း ကြိုတင်သတိပေးတတ်တဲ့ Calendar တွေရဲ့ ကျေးဇူးက ကိုယ့်ကို အချိန်တိကျသူတစ်‌ယောက်ဖြစ်လာစေမှာပါ။ ဒီလို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေသာမက အလုပ်ကိစ္စတွေမှာပါ အချိန်တိကျသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုတွေလည်း ရရှိလာစေနိုင်ပါတယ်။
Calendar App တွေကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဘာလုပ်စရာရှိနေလဲ မသိဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ထင့်မှုတွေကိုလည်း ပြေပျောက်စေပါတယ်။ အလုပ်တွေဘာတွေရှိနေမှန်းမသိ၊ အလုပ်တွေ မပြီးစီးတာမျိုး၊ ဘာတွေ လုပ်ဖို့ ကျန်နေသလဲ စတဲ့ မ‌ေရမရာမှုတွေလည်း မခံစားရတော့တဲ့အတွက် စိတ်လက်ပေါ့ပါးပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အားလပ်ချိန်တွေမှာ စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာ နေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းအသုံးပြုသင့်တဲ့ အကောင်းဆုံး Calendar App တွေကတော့
4. Lightning Calendar by Thunderbird
5. Easy Schedule & Agenda Planner
စတဲ့ Calendarတွေထဲက တစ်ခုလောက်ကို Download ပြုလုပ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်တွေကို ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Calendar တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ မေးလ်နဲ့ အလွယ်တကူဖွင့်လို့ရသလို ဘာမှမလိုဘဲ ဖုန်းမှာ Download ဆွဲပြီးတာနဲ့ တိုက်ရိုက် အသုံးပြုလို့ရတဲ့ App တွေလည်းရှိတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်တွေ အလုပ်တွေကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက် သုံးကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
အလုပ်တွေမပြီးဘဲ လုပ်စရာတွေ အမြဲပုံနေသူတွေအတွက် ဒီအချက်တွေက သင့်ကို ကူညီပေးပါလိမ့်မယ် နဲ့ တစ်နေ့တာ လုပ်စရာတာဝန်တွေကို မြန်မြန် ပြီးမြောက်အောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲ စတာတွေမှာ ဆက်လက်လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အလုပ်တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားလိုသူတွေအတွက် https://bit.ly/32SWwGN မှာ Click ကလေးထောက်ပြီး လျှောက်ထားပါ။